Qatar Airways waxay bilawday barnaamijkeedii ugu horreeyay ee caalami ah ee ardayda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways waxay bilawday barnaamijkeedii ugu horreeyay ee caalami ah ee ardayda
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways ayaa bilaabay barnaamij caalami ah oo u gaar ah ardayda adduunka. Naadiga Ardayda waxaa ku shaqeeya barnaamijka daacadnimada shirkadda, Qatar Airways Privilege Club, waxayna siisaa faa'iidooyin kala duwan oo loogu talagalay ardayda si ay uga taageeraan inta ay ku jiraan safarkooda waxbarasho.
Xubnaha Naadiga Ardayda waxay ku raaxeysan doonaan keyd aad u badan iyo faa'iidooyin la soo dersi doono sida tikidhada qaaska ah ee duulimaadyada, gunnooyinka dheeraadka ah ee bagaashka, dabacsanaanta beddelka taariikhada duulimaadkooda, bogaadintii diyaaradda ee Super Wi-Fi, iyo in ka badan. Waxaa sidoo kale si otomaatig ah looga qori doonaa Naadiga gaarka loo leeyahay ee Qatar Airways - oo furaya xitaa abaalmarino aad u badan - waxayna heli doonaan casriyeyn heer sare ah hadiyad qalin jabineed iyo sidoo kale fursad ay ku kasban karaan 5,000 Qmiles haddii ay saaxiibkood u diraan Naadiga Ardayda.
Madaxa Fulinta ee Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Naadigeenna cusub ee ardayda waxaa si gaar ah loogu talagalay iyada oo maskaxda lagu hayo baahida ardayda. Safarku waa qayb muhiim u ah noloshooda, iyadoo qaar badani doorteen inay wax ku bartaan dibadda inta ay ku jiraan xirfaddooda jaamacadeed ama simistar. Waxaan sidoo kale ognahay in fasaxyada jaamacadeed ee dhaadheer ay fursad qaali ah u yihiin ardayda inay booqdaan qoyskooda ama asxaabtooda ama ay si fudud adduunka u soo sahamiyaan. Markaan dhagaysanay baahida ardayda hada ardayda ah, waxaan ku faraxsanahay inaan ka caawinno inay hadaf ka yeeshaan Naadiga Ardayda.
Barnaamijka cusub ee diyaaradda ee ardayda ayaa qeyb ka ah isbeddelka ballaaran ee Qatar Airways Privilege Club, kaas oo dib loo sifeynayo si loo hubiyo in rakaabka lagu abaalmariyo daacadnimadooda sii socota iyo inay helaan dalabyada iyo faa'iidooyinka ugu wanaagsan.
Xubin ahaan Naadiga loo yaqaan 'Privilege Club', ardaydu waxay kasban doonaan Qmiles markay la safrayaan Qatar Airways, airlines oneworld®, ama mid kamid ah shirkadaha la shaqeeya shirkadda. Ardaydu waxay sidoo kale kasban karaan Qmiles iyagoo adeegsanaya kaararka amaahda ee Qatar Airways iyo markay wax la iibsanayso naadiga tafaariiqda naadiga iyo hab-nololeedka. Qmiles waxaa lagu iibsan karaa faa'iidooyin kala duwan oo xiiso leh oo ay ka mid yihiin duulimaadyo abaalmarin ah, casriyeyn ama boorsooyin dheeri ah oo laga helo Qatar Airways, ka adeegashada Qatar Duty Free iyo sidoo kale duulimaadyada iyo joogitaanka hudheellada lala wadaago
Xubnaha Naadiga Ardayda waxay heli doonaan kaar dijitaal ah, oo lagu keydin karo boorsadooda gacanta ama barnaamijka moobiilka ee Qatar Airways, oo muujinaya heerka xubinnimadooda. Dhammaan ardayda ku jirta waxbarashada waqti-dhiman iyo waqti-dhiman ee u dhexeeya 18 iyo 30 sano waxay xaq u leeyihiin inay ku biiraan barnaamijka.
Safarka Mareykanka: Dowladaha oo dib u furaya muhiim u noqoshada horay ...
Dalxiis u horseedaya soo kabashada dhaqaalaha Jamaica tan iyo ...
Ololayaasha Warshadaha Hoteellada Mareykanka ee lagu buuxinayo 100,000 Shaqooyin Furan